Taovam-pisefoana – Mihanaka manerana ny Nosy ny tsimokaretin’ ny gripa - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Taovam-pisefoana – Mihanaka manerana ny Nosy ny tsimokaretin’ ny gripa
Mamely mafy ny gripa. Tsy mifidy fa voa daholo na ny ankizy na ny lehibe. Karazana gripa mahery no voalaza fa mahazo ny ankamaroan’ny olona ankehitriny, indrindra ny ankizy, ka betsaka no tsy mahazaka ary voatery miditra hopitaly mihitsy. “Misy tokoa ny tsimokaretin’ny gripa miely eto amintsika. Voamarina amin’ny alalan’ny fitaovana iray napetraka isaky ny faritra izany”, hoy ny Dr Ratsitorahina Maherisoa, tompon’ andraikitra manokana momba ny valanaretina etsy amin’ny Institut Pasteur.
Tsy mbola tena valanaretina kosa anefa no misy na dia maro aza ny voa araka ny nambaran’ny avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana, saingy vokatry ny toetr’andro no mahatonga ny aretina. “Mbola tsy nisy ihany koa tamin’ity taona ity ny olona matin’ny gripa, saingy mety ho ny fahanterana na ny aretina hafa mifangaro amin’ny gripa no nahafaty azy”, raha ny nambaran’ny avy amin’ny Institut Pasteur hatrany.
Fahasalamana, Mpanoratra Rijakely, 10.08.2012, 08:57	FIARAHAMONINA